iPhone XS နဲ့ Huawei P20 Pro ကင်မရာပိုင်း ဘယ်သူပိုသာသလဲ ? | Myanmar Mobile App
Home Knowledge iPhone XS နဲ့ Huawei P20 Pro ကင်မရာပိုင်း ဘယ်သူပိုသာသလဲ ?
Apple ရဲ့ စမတ်ဖုန်းသစ်တွေ ဖြစ်တဲ့ iPhone XS နဲ့ iPhone XS Max တွေဟာ အခုဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲမှာ တရားဝင်ရောင်းချနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းသစ်တွေမှာ Bionic A12 နဲ့အတူ dual card dual standby လို hardware ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ချက်တွေ ထည့်သွင်းလာပါတယ်။ ကင်မရာပိုင်းမှာလည်း ပိုကောင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကင်မရာပိုင်းမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ Huawei P20 Pro နဲ့ XS တို့ကို နှိုင်းယှဉ် ပေးသွားမှာပါ။ ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ iPhone XS မှာ 12MP wide-angle + telephoto dual-lens ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Huawei P20 Pro iPhone XS
wide-angle lens ဟာ f/1.8 aperture ထိရပြီး telephoto lens ကတော့ f/2.4 ထိပေးထားပါတယ်။ ကင်မရာ ၂ခုလုံးမှာ optical image stabilization ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အပြင် 2x optical zoom နဲ့ 10x digital Zoom ကိုလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Huawei P20 Pro ရဲ့ကင်မရာပိုင်းမှာတော့ tri-fold optical zoom, Penta-fold 3-shot zoom နဲ့ ten times digital zoom ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ Leica triple ကင်မရာကို သုံးထားပါတယ်။ အဓိက ကင်မရာကတော့
40MP, 1 /1.73″RGB sensor, Quad Bayer structure, f/1.8 aperture lens နဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယကင်မရာငယ်ကတော့ 20MP, 1/2.78″ monochrome sensor, f/1.6 aperture lens ကိုသုံးထားပါတယ်။ တတိယကင်မရာမှာတော့8MP, 1/4.4″ RGB sensor, f/2.4 aperture lens နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကင်မရာ စွမ်းဆောင်ချက်တွေထဲမှာ အတော်ကြီးကို အဆင့်မြင့်တယ်လို့ ဆိုနိုင်မှာပါ။
စမတ်ဖုန်း ၂မျိုးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ portrait mode ကိုစမ်းရိုက်ကြည့်ထားပါတယ်။ ဒီလိုရိုက်တဲ့ အချိန်မှာ P20 Pro ရဲ့ဓာတ်ပုံထုတ်ပေးမှုဟာ ပြင်ပအခြေအနေနဲ့ နည်းနည်းလေးလွဲနေတာမျိုးတွေ ရှိပြီး၊ iPhone XS ကတော့ သဘာဝအရောင်အတိုင်းကို အတိကျဆုံး ထုတ်ပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
night scene တွေကို ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ iPhone XS ဟာ ညအမှောင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အလင်းတစ်ခုခြင်းဆီကို စစ်ထုတ်ပြီး အသေးစိတ်ကျတဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခု အဖြစ်ထုတ်ပေးသလို၊ P20 Pro မှာလည်း ထိုနည်း၎င်းပါဘဲ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ underexposed ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ သိုပေမယ့် စမတ်ဖုန်း ၂မျိုးလုံးဟာ ဒီအပိုင်းမှာ သိပ်ကွဲပြားနေတာ မတွေ့ရပဲ ဘယ်သူကပိုကောင်းတယ် ဆိုတာခွဲခြားဖို့ ခက်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်ဆုံးထိ ခွဲခြားကြည့်
မယ်ဆိုရင်တော့ ကင်မရာ၂လုံးသာ တပ်ထားတဲ့ iPhone XS ကပိုသာ သယောင်ပါ။ စမတ်ဖုန်း ၂မျိုးလုံးမှာ အနည်းငယ်သာကွဲပြားတဲ့ အားသာချက်၊အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ကောက်ချက်ချရပါလိမ့်မယ်။ video ပိုင်းကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုရင် iPhone XS ကိုညွှန်းလိုပြီး၊ ဓာတ်ပုံပိုင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ P20 Pro ကိုညွှန်းလိုပါတယ်။
Apple ရဲ့ စမတျဖုနျးသဈတှေ ဖွဈတဲ့ iPhone XS နဲ့ iPhone XS Max တှဟော အခုဆိုရငျ ဈေးကှကျထဲမှာ တရားဝငျရောငျးခနြပွေီ ဖွဈပါတယျ။ စမတျဖုနျးသဈတှမှော Bionic A12 နဲ့အတူ dual card dual standby လို hardware ပိုငျးဆိုငျရာစှမျးဆောငျခကျြတှေ ထညျ့သှငျးလာပါတယျ။ ကငျမရာပိုငျးမှာလညျး ပိုကောငျးတဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှေ ပါဝငျလာတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကငျမရာပိုငျးမှာ ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိတဲ့ Huawei P20 Pro နဲ့ XS တို့ကို နှိုငျးယှဉျ ပေးသှားမှာပါ။ ကငျမရာပိုငျးအနနေဲ့ iPhone XS မှာ 12MP wide-angle + telephoto dual-lens ကိုတပျဆငျပေးထားပါတယျ။
wide-angle lens ဟာ f/1.8 aperture ထိရပွီး telephoto lens ကတော့ f/2.4 ထိပေးထားပါတယျ။ ကငျမရာ ၂ခုလုံးမှာ optical image stabilization ကိုထောကျပံ့ပေးတဲ့ အပွငျ 2x optical zoom နဲ့ 10x digital Zoom ကိုလညျး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
Huawei P20 Pro ရဲ့ကငျမရာပိုငျးမှာတော့ tri-fold optical zoom, Penta-fold 3-shot zoom နဲ့ ten times digital zoom ထောကျပံ့ပေးထားတဲ့ Leica triple ကငျမရာကို သုံးထားပါတယျ။ အဓိက ကငျမရာကတော့
40MP, 1 /1.73″RGB sensor, Quad Bayer structure, f/1.8 aperture lens နဲ့ဖွဈပွီး၊ ဒုတိယကငျမရာငယျကတော့ 20MP, 1/2.78″ monochrome sensor, f/1.6 aperture lens ကိုသုံးထားပါတယျ။ တတိယကငျမရာမှာတော့8MP, 1/4.4″ RGB sensor, f/2.4 aperture lens နဲ့ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာကငျမရာ စှမျးဆောငျခကျြတှထေဲမှာ အတျောကွီးကို အဆငျ့မွငျ့တယျလို့ ဆိုနိုငျမှာပါ။
စမတျဖုနျး ၂မြိုးနဲ့ ပတျသတျပွီး ဓာတျပုံတှရေိုကျကွညျ့တဲ့ အခါမှာတော့ ပထမဆုံးအနနေဲ့ portrait mode ကိုစမျးရိုကျကွညျ့ထားပါတယျ။ ဒီလိုရိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ P20 Pro ရဲ့ဓာတျပုံထုတျပေးမှုဟာ ပွငျပအခွအေနနေဲ့ နညျးနညျးလေးလှဲနတောမြိုးတှေ ရှိပွီး၊ iPhone XS ကတော့ သဘာဝအရောငျအတိုငျးကို အတိကဆြုံး ထုတျပေးထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
night scene တှကေို ရိုကျကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါမှာတော့ iPhone XS ဟာ ညအမှောငျထဲမှာ ရှိနတေဲ့အလငျးတဈခုခွငျးဆီကို စဈထုတျပွီး အသေးစိတျကတြဲ့ ပုံရိပျတဈခု အဖွဈထုတျပေးသလို၊ P20 Pro မှာလညျး ထိုနညျး၎င်းငျးပါဘဲ။ တဈခါတဈရံမှာတော့ underexposed ဖွဈသှားတာမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။ သိုပမေယျ့ စမတျဖုနျး ၂မြိုးလုံးဟာ ဒီအပိုငျးမှာ သိပျကှဲပွားနတော မတှရေ့ပဲ ဘယျသူကပိုကောငျးတယျ ဆိုတာခှဲခွားဖို့ ခကျပါတယျ။ အဆုံးစှနျဆုံးထိ ခှဲခွားကွညျ့
မယျဆိုရငျတော့ ကငျမရာ၂လုံးသာ တပျထားတဲ့ iPhone XS ကပိုသာ သယောငျပါ။ စမတျဖုနျး ၂မြိုးလုံးမှာ အနညျးငယျသာကှဲပွားတဲ့ အားသာခကျြ၊အားနညျးခကျြတှေ ရှိနတေယျလို့ ကောကျခကျြခရြပါလိမျ့မယျ။ video ပိုငျးကိုဦးစားပေးတယျဆိုရငျ iPhone XS ကိုညှနျးလိုပွီး၊ ဓာတျပုံပိုငျးအတှကျဆိုရငျတော့ P20 Pro ကိုညှနျးလိုပါတယျ။
Previous articleGalaxy S8 စီးရီးဖုန်းတွေအတွက် Super Slow Motion နဲ့ AR Emoji လုပ်ဆောင်ချက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Samsung
Next articleSony က ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် PlayStation Classic ကို မိတ်ဆက်